Allgedo.com » 2017 » March » 06
Home » Archive Daily March 6th, 2017
Daawo: Barnaamij gaar ah oo lagaga hadlayay Saldhiga Booliska ee Degmada Luuq.
Barnaamijkan oo lagaga hadlayay dib u dhiska saldhiga Booliska ee Degmada Luuq ayaa sidoo kale lagaga hadlay doorka Amniga iyo Arimaha bulshada ee saldhigu ka qaadan karo horumarka Degmada. Read More →
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa dib ugu soo laabtay Kismaayo.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Kismaayo ee Caasimada KMG ah ee Jubbaland. Madaxweynaha iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka koobna labada gole ee Dowlada ayaa Magaalada Muqdisho kaga soo qayb galay Munaasabadii Caleemo saarka Madaxweynaha Dowlada Federaalka ah Maxamed Cabdullahi Farmaajo. Labada Madaxweyne ku xigeen iyo...